Qoyska Elmaas Elman oo War kasoo saaray dilkeeda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qoyska Elmaas Elman oo War kasoo saaray dilkeeda
Khamiistii todobaadkii la soo dhaafay ayaa lagu dilay Almaas Elman Gudaha xeradaXalane ee Magaalada muqdisho,waxaana jirin cid weli faah faahisay qaabka uu u dhacay dilkeeda,waxana War kasoo saarey qoyskeeda.
War-Saxaafadeed ay soo saareen Qoyskeeda ayaa waxaa ay ku dalbadeen in baaris deg deg ah lagu sameeyo dilkeeda,isla markaana baaristaas ay ka qeyb qaadato dowladda Canada oo ay dhalasho ka heysatay.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen dadka Soomaaliyeed ay ka dalbanayaan inay joojiyaan wararka kala duwan eek u gadaaman dilka Gabadhooda ee lagu baahinayo Baraha Bulshada baaristana ay siwadajir ah uga qeyb qaataan dowladaha Soomaaliya iyo Canada.
Almaas ayaa waxaa ay heystay dhalashada Dalka Canada,waxaana ay noqotay qofkii labaad ee heysta dhalashada dalka Canada oo sanadkan lagu dilo gudaha Soomaaliya,waxaana horay loo dilay Hoan Naaleeye.
Hay’adda NISA oo soo bandhigtay Nin ka dambeeyey qarixii shalay
Dhageyso:-Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay Nin is qarxin lahaa